Tatoazy amin'ny sandrin'ny vehivavy | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy eo am-pelatanan'ny vehivavy
Sergio Gallego | | Tatoazy amin'ny sandry
Ny tatoazy ao amin'ny faritry ny forearm dia fironana ankehitriny, Na lahy na vavy. Hatramin'ny farany, dia noheverina ho tatoazy mampidi-doza izy ireo noho ny faritry ny vatana resahina. Sarina tatoazy sarotra afenina ireo indrindra amin'ny volana fahavaratraNa izany aza, mihabetsaka ny mahita vehivavy miaraka amina endrika isan-karazany ao amin'io faritra amin'ny vatana io.
Ny zavatra tsara momba ny tatoazy toy izany dia ny mahasarika maso azy ireo ary toa lavorary izy ireo. Raha mihevitra ny tenanao ho vehivavy sahisahy ianao ary amin'izany, somary maditra, manao tombokavatsa amin'ny faritra am-pelatanana no mety aminao. Avy eo, manome hevitra anao izahay mba hahafahanao mampiditra ilay endrika tianao sy tadiavinao indrindra amin'ny felatanana.
3 Teny na andianteny
4 Masoandro sy volana
6 Voninkazo Lotus
Ny voninkazo dia tatoazy tonga lafatra ho an'ny vehivavy. Izy io dia zavatra somary vehivavy ary izy ireo dia mety hitafy amin'ny faritra lava. Noho ny sakan'ny velaran'ilay faritra dia afaka misafidy voninkazo tokana ny vehivavy na misambotra fehezam-boninkazo isan-karazany mamonosina ny vodin-tanana iray manontolo. Raha misafidy endrika misy loko maro loko ianao dia tonga lafatra izy ireo raha ny amin'ny fitafiana azy ireo, indrindra amin'ny fahavaratra.
Ny iray amin'ny tatoazy mahazatra indrindra eo amin'ny sehatry ny vehivavy dia ny mpanonofy. Ny tandindona na ny dikany dia manondro ny fiarovana ny olona amin'ny hery ratsy. Izy ireo dia volavolan'ny tandindona lehibe ary mety amin'ny lafika rehetra. Misaotra ny toeran'ny sandry, manome ny fahatsapana izy ireo fa manantona ary mamela antsipiriany marobe.
Teny na andianteny
Ny teny na andian-teny dia mahazatra eo amin'ny tontolon'ny tombokavatsa. Matetika izy ireo dia misy dikany manokana ho an'ilay olona manapa-kevitra ny hisambotra azy ireo amin'ny hodiny. Ny faritry ny forearm dia mety indrindra amin'izany, na ny andiam-pitiavana, ny teny misy dikany lehibe na daty manokana ho an'ilay vehivavy resahina.
Masoandro sy volana
Safidy mahafinaritra hafa ho an'ny forearm dia ny an'ny masoandro sy ny volana. Azonao atao ny manatevin-daharana ny soroka na manao ny masoandro amin'ny iray ary ny volana amin'ny iray hafa. Raha misaraka amin'ny tatoazy izy ireo, ny volana dia manondro ny maha-vehivavy sy ny fahavokarana. Raha ny masoandro, ny tatoazy dia afaka maneho ny tanjaka, ny fanantenana ary ny tolona amin'ity fiainana ity.
Raha manapa-kevitra ny hisafidy ny hametaka ny roa amin'ny tatoazy iray ianao, dia tandindon'izy ireo ny fandanjana tonga lafatra eo anelanelan'ny andry roa mifanohitra, toy ny amin'ny tsara sy ny ratsy na ny andro sy ny alina. Tatoazy misy tandindona lehibe izay mifanentana tanteraka amin'ny sehatry ny sandrin'ny vehivavy.
Ny mandala dia tandindon'ny kolontsaina Hindou izay mahazatra indrindra ny fanaovana tatoazy amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana, toy ny forearm. Ny mandala dia maneho ny fifandanjana tanteraka eo amin'ny saina sy ny vatana. Ny mandala dia manaitra ary feno antsipiriany mba hahafahanao mitafy azy am-pifaliana.
Ny voninkazo lotus dia tatoazy tonga lafatra ho an'ny vehivavy sahy izay tsy mampaninona ny olona mahita ny tatoazy. Toy ny amin'ny mandala, ny voninkazo lotus dia feno tandindona sy dikany.
Ny dikan'ity karazana tatoazy ity dia samy hafa arakaraka ny loko voafantina sy ny fomba fametrahana ny felana. Ny voninkazo lotus dia midika hoe ny fahafahan'ny olona mandresy vato misakana sy tonga miaraka aminy amin'ny fahasambarana feno.
Ireto misy ohatra amin'ny tatoazy izay azonao atao amin'ny sandrinao. Tadidio fa ampahany amin'ny vatana izy io izay azo jerena, indrindra amin'ny volana mafana sy ny toetr'andro tsara. Mifanohitra amin'izany aza, isaky ny vehivavy no manapa-kevitra amin'ny forearm ary afaka manao tatoazy misy dikany lehibe ary koa manaitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy amin'ny sandry » Tatoazy eo am-pelatanan'ny vehivavy
Tatoazy Cthulhu, mahatadidy ny asan'ny Lovecraft
Tatoazy kubista, entanin'ity fomba kanto ity